9. Upa-nissaya Paccaya | Dhamma Training Center
Aug6th, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၉ – ဥပနိဿယပစ္စယော Upanissaya Paccayo (Strong Dependence condition)...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo (Strong dependence condition) PDF File
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo (Strong dependence condition) PDF file9– Upanissaya Paccayo ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော PDF file ...
Feb 19 th, 2020
Upanissaya – ဥပနိဿယပစ္စယော ၁-၅ 19.2.2020 – 21 Days Retreat (A-E)
နေပြည်တော် ရန်အောင်မြင်တောရကျောင်း (မြို့တော်ဝန်ကျောင်း) ၌ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဘ၀နှင့်ပဋ္ဌာန်းတရား (၂၁-ရကျ) တရားစခန်းအတွင်း ဟောကြားတော်မူသော ဥပနိဿာယယပစ္စည်း Upanissaya – ဥပနိဿယပစ္စယော ၁-၅ 19.2.2020 – 21 Days Retreat (A-E) Upanissaya...
Feb 18 th, 2020
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccaya ( Strong dependence condition ) (1 of 15)
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccaya ( Strong dependence condition ) (1 of 12) ၁-ကုသလတ္တိက ၇-ပဥှာဝါရ ၁-ပစ္စယာနုလောမ ၁-၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissayapaccayo...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (2 of 15)
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (2 of 12) Strong dependence condition Number nine is Upanissaya Paccaya. ‘Upa’...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (3 of 15)
Upanissayapaccayo – Pañhāvāro Kusalo dhammo kusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo – ārammaṇūpanissayo, anantarūpanissayo, pakatūpanissayo. Ārammaṇūpanissayo – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ ၄၂၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု – ၁) အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊ ပကတူပနိဿယော။ အာရမ္မဏူပနိဿယော ဒါနံ ဒတွာ သီလံ...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (5 of 15)
၉ – ဥပနိဿယပစ္စယော ပါဠိနှင့် မြန်မာပြန် zawgyi ၄၂၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဥပနိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု -၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ဥပနိဿယပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ အာရမ္မဏူပနိဿယော၊ အနန္တရူပနိဿယော၊...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (6 of 15)
၉-ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ ဥပနိဿယပစ္စည်းကို မိုးနှင့် ပမာပြုကြသည် ဥပနိဿယပစ္စည်းကို ရှေးဆရာတော်ကြီးများက မိုးနှင့် ပမာပြုတော်မူကြပါသည်။ မိုးကြီးပမာ သတ္တ၀ါအများ တည်နေနိုင်မှု၊ ကျေးဇူးပြု၊ ခေါ်လေဥပနိဿယ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိုးက သက်ရှိသက်မဲ့အားလုံးတို့၏ မှီရာကြီး ဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (7 of 15)
(၁) ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ (ကု-ကု) ကုသိုလ်တည်းဟူသော အကြောင်းဓမ္မက ကုသိုလ်တည်းဟူသော အကျိုးဓမ္မကို ပကတူပနိဿယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရလာ ပါဠိတော်ကိုပြရလျှင် “သဒ္ဓံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (8 of 15)
(၂) ကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ (ကု-အကု) zawgyi ကုသိုလ်တည်းဟူသော အကြောင်းဓမ္မကြောင့် အကုသိုလ်တည်းဟူသော အကျိုးဓမ္မကို ပကတူပနိဿယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရလာပါဠိတော်ကို ပြရလျှင် “သဒ္ဓံ ဥပနိဿာယ မာနံ ဇပ္ပေတိ၊ ဒိဋ္ဌိံ ဂဏှာတိ” သဒ္ဓါတရား...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (9 of 15)
(၄) အကုသလော ဓမ္မော အကုလဿ ဓမ္မဿ (အကု-အကု) zawgyi သုတသောမမင်းနှင့် ပေါရိသာဒ (အကု၊ အကု-၁) ရာဂံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ ဟနတိ၊ ရာဂကို အားကြီးစွာအမှီပြု၍ ပါဏံ ဟနတိ သူ့အသက်ကို သတ်၏။ ...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (10 of 15)
ဆုတောင်းမှားခြင်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်ခဲ့သည့် ကာဠီဘီလူးမ၀တ္ထု zawgyi လိုချင်မှု ရာဂ၊ မုန်းတီးမှု ဒေါသ၊ အပြစ်ကို ဖုံးလွှမ်းစေသည့် မောဟ၊ ထောင်လွှားမှု မာန်မာန၊ အယူလွဲမှားမှု ဒိဋ္ဌိနှင့် ဆုတောင်းခြင်း ပတ္ထနာတို့ကြောင့် မဖြစ်နိုင်သည့် အကုသိုလ်ဟူ၍ မရှိကောင်းပေ။ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရပါဠိတော်၌...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (11 of 15)
(၅) အကုသလော ဓမ္မော ကုလဿ ဓမ္မဿ (အကု-ကု) zawgyi အကုသိုလ်တည်းဟူသော အကြောင်းဓမ္မက ကုသိုလ်တည်းဟူသော အကျိုးဓမ္မကို ပကတူပနိဿယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရလာ ပါဠိတော်ကို ပြရလျှင် “ရာဂံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (12 of 15)
(၆) အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿဿ ဓမ္မဿ (အကု-ဗျာ) zawgyi အကုသိုလ်တည်းဟူသော အကြောင်းဓမ္မက အဗျာကတတည်းဟူသော အကျိုးဓမ္မကို ပကတူပနိဿယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူး ပြု၏။ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရလာ ပါဠိတော်ကိုပြရလျှင် အကုသလံ ကမ္မံ ၀ိပါကဿ ဥပနိဿယ ပစ္စယေနပစ္စယော...
(၈) အဗျာကတော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ (ဗျာ-ကု) zawgyi အဗျာကတတည်းဟူသော အကြောင်းဓမ္မက ကုသိုလ်တည်းဟူသော အကျိုးဓမ္မကို ပကတူပနိဿယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရလာပါဠိတော်ကို ပြရလျှင် ကာယိကံ သုခံ ဥပနိဿာယ ဒါနံ ဒေတိ၊ သီလံ...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (14 of 15)
(၉) အဗျာကတော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ (ဗျာ-အကု) zawgyi အဗျာကတတည်းဟူသော အကြောင်းဓမ္မက အကုသိုလ်တည်း ဟူသော အကျိုးဓမ္မကို ပကတူပနိဿယ သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ပဋ္ဌာန်းပဥှာဝါရလာ ပါဠိတော်ကိုပြရလျှင် ——— ကာယိကံ သုခံ ဥပနိဿာယ ပါဏံ...
၉ – ဥပနိဿယပစ္စ‌ယော Upanissaya Paccayo ( Strong dependence condition ) (15 of 15)
ဥတု ၊ ဘောဇန ၊ သေနာသန zawgyi ဥတု၊ ဘောဇန၊ သေနာသန စသည်တို့သည် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းင်းတို့ကို အဗျာကတဟု ခေါ်ပါသည်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်နိုင်ရန်လည်း တွန်းအားဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့ မကောင်းမှု အကုသိုလ် ဖြစ်ရန်လည်း တွန်းအား...
Dhamma Training Center- ရှောင်လေဝေးဝေး ဒုစရိုက်ဘေး ဓမ္မကျောင်းတော် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစာ
Dhamma Training Center- ရှောင်လေဝေးဝေး ဒုစရိုက်ဘေး ဓမ္မကျောင်းတော် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစာ ...
Dhamma Training Center – ကိုးကွယ်ရာအစမှသည် ကိုးကွယ်ရာအစစ်သို့ – ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစာ
Dhamma Training Center – ကိုးကွယ်ရာအစမှသည် ကိုးကွယ်ရာအစစ်သို့ – ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစာ ...
Dhamma Training Center – ကူညီ‌ဆောင်ရွက်ရေးမင်္ဂလာ ၄ ပါး- ဓမ္မကျောင်းတော် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစ
Dhamma Training Center – ကူညီ‌ဆောင်ရွက်ရေးမင်္ဂလာ ၄ ပါး- ဓမ္မကျောင်းတော် ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစ...
Dhamma Training Center – အေးချမ်းသာယာမင်္ဂလာ ဓမ္မကျောင်းတော် – ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစာ
Dhamma Training Center – အေးချမ်းသာယာမင်္ဂလာ ဓမ္မကျောင်းတော် – ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်ခန်းစာ ...